ShweMinThar: ၀က်သားဟင်းလေးချက် - သက်သက်လွတ် ပဲကုလားဟင်း - ငှက်ပျောဖူးချဉ် - ပုစွန်ခြောက် ငံပြာရည်ကြော်အစပ်
၀က်သားဟင်းလေးချက် - သက်သက်လွတ် ပဲကုလားဟင်း - ငှက်ပျောဖူးချဉ် - ပုစွန်ခြောက် ငံပြာရည်ကြော်အစပ်
နွေရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့ ရာသီဥတုကပူပြင်းတာကြောင့် အနေအထိုင် အစားအသောက်တွေကို ဂရုစိုက်ကြရတာ ခါတိုင်းရာသီတွေ ထက်ပိုမယ်ထင်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်မတွေ အိမ်ရှင်ထီးတွေကတော့ မိသားစုစားသောက်မယ့်အစားအစာတွေချက်ပြုတ်ကြတဲ့အခါ သန့်ရှင်းဖို့ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါမျိုးလေးတွေမဖြစ်စေဖို့ လျှာအလိုလိုက်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့မညီမဖြစ်ဖို့ စဉ်းစားတွေးပြီး ချက်ကြရပါတယ်။
အခု ကျနော်နေထိုင်ရာ မန္တလေးဘက်ကနယ်တွေမှာ ချက်စားတတ်တဲ့ဟင်းအတွဲအစပ်တွေကို ကူးယူဝေငှလိုက်ပါတယ်။ ၀က်သားဟင်းဆီပြန်ဆိုရင် အီတတ်တော့ အဖန် အချဉ်အရသာနှောပြီး ဟင်းလေးချက်အသွင်ဖန်တီးမယ်၊ ကုလားပဲဟင်းအစား ပဲစင်းငုံနဲ့ အသီးအရွက်အချို့ရောစပ်ကာ အရည်သောက်ချက်မယ်၊ မချိုမချဉ် အရံအနေနဲ့ ငှက်ပျောဖူးချဉ်လေးသုပ်စားမယ်၊ ပြီးတော့ကာ အငံအရသာအတွက် ပုစွန်ခြောက်ကဲသော ငံပြာရည်ကြော်အစပ်လေးကြော်မယ်။ မကောင်းဘူးလား။
• ဝက်သား - ၁ပိဿာ
• ဆီ - ၃ဝကျပ်သား
• သရက်သီးခြောက် - ၅ကျပ်သား
• သစ်ကြံပိုး (သို့) ကရဝေးအမှုန့် - ၅ကျပ်သား
• ဆီးဖြူသီး - ၂ကျပ်ခွဲသား
• ဖန်ခါးသီး - ၁မတ်သား
• မက်လင်ခြောက် (ပရဆေးဆိုင်မှာရနိုင်) - ၅မတ်သား
• မရမ်းသီးခြောက် - ၅မတ်သား
• မဆလာ - ၂ဇွန်း (အချိုစားဇွန်း)
• ငါးပိ (ရေဖျော်ထား) - ၁ဝသား
• အရသာမှုန့် - ၅ကျပ်သား
• ကြက်သွန်နီ - ၁ဝသား
• ချင်း/ကြက်သွန်ဖြူ - ၅ကျပ်သားစီ
ပုစွန်ခြောက် ငံပြာရည်ကြော်နည်းကတော့ ရိုးရိုးမြင်နေကျ စားဘူးနေကျလေးဖြစ်မှာပါ။ ကြော်နည်းတွေလည်းဆင်တူလေးတွေဖြစ် ကြမှာပါ။ စည်ကတော့ စည်ကြော်စားတဲ့နည်းလေးကိုအားလုံးပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ်။
. ပုစွန်ခြောက်မှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၅ ဇွန်း
. နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
. ငံပြာရည် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်းခွဲ
. ကြက်သွန်ဖြူ - ၈ တက် (ထောင်းထားပါ)
. ကြက်သွန်နီ - ၅ လုံး (ပါးပါးလှီးထားပါ)
. ငရုတ်သီးခွဲကြမ်း - စားပွဲဇွန်း ၁ဝ ဇွန်း
. ပဲဆီ - ၁ ခွက် (လိုသလောက်၊ ဟင်းချက်ရန်တိုင်းသောခွက်)
. ဆား - အနည်းငယ်
. ကြက်သွန်ဖြူအကွင်းကြော် - စားပွဲဇွန်း ၅ ဇွန်း (ကြော်ပြီးမှ ဖြူးရန်)
. ကြက်သွန်နီအကြွတ်ကြော် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း (ကြော်ပြီးမှ ဖြူးရန်)
၂။ ဆီပူလာလျှင် နနွင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ/နီထည့်ပြီးဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ နွမ်းလာလျှင် ငံပြာရည်ထည့်ပါ။ အနံ့မွှေးလာလျှင် ငရုတ်သီးခွဲကြမ်းနှင့် ပုစွန်ခြောက်မှုန့်ထည့်ပြီးကြော်ပါ။ ဆီနည်းလျှင် ထပ်ထည့်ပါ။
၃။ အပေါ့အငန်မြည်းပြီးလိုတာထပ်ဖြည့်ပါ။ မီးပိတ်ပြီးမီးဖိုပေါ်ကချခါနည်းမှ ကြက်သွန်ဖြူအကွင်းကြော်၊ ကြက်သွန်နီအကြိတ်ကြော်တို့ ရောမွှေပါ။ တို့စရာစုံလင်စွာနဲ့ တွဲဖက်စားမယ်ဆိုလျှင် ထမင်းမြိန်စေတာအမှန်ပါ။
မှတ်ချက် - အငန်မစားနိုင်သူများအတွက် ငါးခြောက်မှုန့် (သို့) ပုစွန်ခြောက်သုံးပြီးငံပြာရည်လုံးဝမထည့်ဘဲအသားမှုန့်နှင့် အတူကြော် အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအတိုးအလျော့လုပ်ပြီးကြော်လည်းအရသာအသစ် တီထွင်နိုင်ပါတယ်။
♦ ငှက်ပျောဖူး – ၁ဖူး
♦ စောင်းလျားသီး – ၂လုံး
(ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဟင်းလေးချက်နဲ့ဆိုရင် ကုလားပဲနှပ်၊ ငါးခြောက်နှပ်ဆီပြန်တွေပေါင်းစပ်ချက်ပြုပ်တတ်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ရာသီပြင်းတော့ အခန့်မသင့်ရင် ၀မ်းပျက်မှာစိုးလို့ အထက်ပါအတိုင်းတွဲစပ်ချက်ပြုတ်လိုက်တာပါ။ သက်ဆိုင်ရာချက်ပြုတ်ပြသူနာမည် များကိုထည့်ထားပါတယ်။)